Can 2019 : Tandindomin-doza noho ny hafitsoky ny FMF -
AccueilSongandinaCan 2019 : Tandindomin-doza noho ny hafitsoky ny FMF
Famarinana ny baolina kitra malagasy any an-davaka. Izay no azo ilazana ny “fikafika” sy ny teti-dratsin’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra na FMF amin’ny fanakorontanana ny fifidianana federaly eo anivony. Araka ny efa fantatra mantsy, tokony notanterahina, ny 3 novambra teo, tany Sambava ny fifidianana eo anivon’ny federasiona manomboka any amin’ny filohany izany ka hatramin’ireo komity mpanatanteraka. Tsy tanteraka izany noho ny fanakorontanana ambadika nataon’ny olon’ny federasiona amin’izao fotoana izao.
Tamin’izany indrindra no nampahafantarin’ny Komity mpanomana ny fifidianana teo anivon’ny federasiona fa mihemotra ny alatsinainy 5 novambra (omaly) ny fifidianana saingy, tsy nanome ny toerana tokony nanatanterahana izany izy ireo. Nilaza mantsy ireo mpikarakara fa tsy tratra ary tsy feno ny fetr’isa (quorum) ahafahana miroso amin’ny fifidianana tany Sambava. Marihina anefa fa efa mihoatra ny fetr’isa aza ny isan’ireo ligi-paritra, izay 14 izy ireo. Raha ny voalazan’ny lalàna mifehy ny baolina kitra anefa, rehefa mahafeno antsasaky ny isan’ny ligy miampy iray dia afaka miroso amin’ny fifidianana. Noho izany, misy ligi-paritra 22 eo anivon’ny FMF sy ny tontolon’ny baolina kitra malagasy, 14 anefa ny isan’ireo ligy tonga handatsa-bato, tsy mbola neken’ny komity mpanomana teo anivon’ny federasiona izany. Izany dia manaporofo avy hatrany ny fisian’ny politika ambadik’ireo mpitantana izay mbola nilatsaka ho fidiana filohan’ny federasiona.
Nisy ny fampiantsoan’ny minisiteran’ny Fanatanjahantena (MJS) ireo komity mpanatanteraka eo anivon’ny FMF sy ireo filohan’ny ligim-paritra amin’ny handinihana sy handravonana ny disadisa sy ny korontana misy manodidina ny fifidianana filohan’ny federasiona. Tsy nisy nipika ny resaka ary tsy mbola tapaka nandritra izany koa ny daty hanatanterahana indray ny fifidianana…
Hita ary tsapa fa ataon’ny FMF sy olom-bitsy ho fiarovan-tseza sy tombontsoa ny ekipa-pirenena, Barea de Madagascar, sy ny baolina kitra malagasy. Sambany hiatrika ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika 2019 na Can 2019 i Madagasikara tamin’ny alalan’ny vokatra sy ezaky ny Barea, nefa dia mety ho semban-drahona izany noho ny hafitsoky ny federasiona sy ireo kandidà vitsivitsy. Izany hoe, raha toa ka nandalo teto Madagasikara ny iraky ny Fifa sy ny Caf, efa niala teto izy ireo satria tapitra ny fe-potoana nomena ny FMF amin’ny fanatanterahana ny fifidianana. Raha izay, hilatsaka tsy ho ela ny sazy avy amin’ireo rafitra ambony iraisam-pirenena eo amin’ny baolina kitra ireo ary izay no mety tsy ahafahantsika hiatrika izany Can 2019 izany indray.
Raha ny marina, nisy ny ezaka nataon’ny ekipa-pirenena amin’ny hiatrehantsika ny Can 2019 any Kameronina. Toraka izany koa ny fikelezan’ny malagasy mpitia baolina kitra aina ka namoizana ain’olona mihitsy tamin’ny fifanintsanana ka nifandoman’ny Barea tamin’i Senegal tetsy Mahamasina. Ho very maina izany ny ezaky ny Barea sy fanohanan’ny Malagasy ny baolina kitra noho ny fanaovan’olom-bitsy takalon’aina. Andrasana ny ho tohin’ny raharaha.